Shiinaha Midab Falanqeeyaha Maqaarka Sare ee Midabka Dahabiga Soosaarka iyo Warshadda | Meicet
Kooxdayada tignoolajiyada xirfadeed ee taageerta waxay ku siin karaan barnaamij casriyeyn bilaash ah 3 ~ 6 bishiiba.
Waxaad kaheli kartaa caawinaada aad ubaahantahay waqti ahaan taleefan, webcam, chat online (Google talk, Facebook, WhatsApp, Skype ， Wechat). Fadlan nala soo xiriir mar haddii mashiinku wax dhibaato ah leeyahay. Adeegga ugu fiican ayaa la bixin doonaa.
Hordhaca Spectra:RGB Light.Careynta guud,Is barbar dhig
Kala-qaybsanaanta. Iftiinka UV, Iftiinka Qoryaha
Habka isku xirka:Dhinaca suufka
Pixel:HD 8 milyan oo pixels waxtar leh
Cabir: (sanduuqa dibedda 580 * 520 * 480)
Miisaanka saafiga ah: 17KG
Danab: Global AC100-240V DC19V (24V-3A) 50-50HZ
Shuruudaha deegaanka gaadiidka iyo keydinta
1.Heerkulka cimilada:15-70 C
2.qoyaan qaraabo: in ka yar 90%, ma jiraan wax uumis ah
1.Ha dhigin qorrax qorraxeed toos ah ama roob u daaya;
2.Haddii kaydinta leh heerkul sarreeya ama qoyaan badan, waxyeello u geysan karto
3. Inta lagu guda jiro gaadiidka aagga kaydinta, fiiro gaar ah u yeelo inaad ka fogaato mid ba'an
isbedelka heerkulka, taas oo sababi doonta uumiga.
Kaydintu waa inay lahaataa heer-kul iyo cabbirka qoyaanka ee loo baahan yahay
qalab, suufka hoose ee laga sameeyay maaddooyinka ku habboon, hawo-qaadashada
tas-hiilaadka, caddaynta cayayaanka, ka hortagga jiirka, caddaynta caariyaysi, ka-hortagga wasakhda,
qoyaanka, qalabka bullaacadaha, tas-hiilaadka laydhka iyo tas-hiilaadka dabka.
Marka heerkulka iyo huurka bakhaarku aanu la kulmin
shuruudaha, waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin qaar si loo xalliyo dhibaatada.
Xiga: Qalinka Digital Monitor Monitor wuxuu ku shaqeeyaa falanqaynta maqaarka ee MC88